कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? ८ घण्टा भन्दा कम सुत्नेलाई हुन सक्छ यस्तो समस्या | mulkhabar.com
कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? ८ घण्टा भन्दा कम सुत्नेलाई हुन सक्छ यस्तो समस्या
January 6, 2018 | 9:48 pm 225 Hits
काठमाडौं, २२ पुस ।
दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा डिप्रेसनको समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो।
सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्था बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्नेमा बढी मानसिक समस्या र चिन्ता देखिएको सो अध्ययनमा पत्ता लागेको हो। विश्वविद्यालयले अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बढी सुत्ने मानिसमा भन्दा कम सुत्ने मानिसमा बढी नकारात्मक सोचाई पाइएको पनि उल्लेख गरेको छ।
आठ घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसहरुमा चिन्ता, कुन्ठा, तनाव र निराशा धेरै आउने गरेको सो विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित मेडिकल जर्नलको पछिल्लो संस्करणमा छापिएको समाचारमा जनाइएको छ। त्यसैगरी सो अनुसन्धानले सुत्ने समयमा अनियमितता भएका मानिसहरुलाई ध्यान एकत्रित गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको पाइएको पनि बताएका छन्।
सुताई नपुगेका मानिसहरुमा आउने नकारात्मक सोचाईका कारण ध्यान एकत्रित गर्न पनि गाह्रो हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्ष छ। अनियमित सुताई भएकाहरुमा नकारात्मक सोँचको विकास हुने गरेको र उनीहरुको जीवनमा नै नकारात्मक असर असर समेत पर्ने गरेको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ।
अनुसन्धान टोलीका एकजना सदस्य जाकोब नोटाले नकारात्मक सोँचका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मानिसलाई तनावका साथै मानसिक असन्तुलनतर्फ समेत उन्मुख गराउनसक्ने खतरा देखिएको बताए। अनुसन्धानकर्ताहरुले मानसिक तनाव र चिन्ता कम गर्न नियमित रुपमा र दिनमा कम्तीमा आठ घन्टासम्म सुत्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। रासस
कान्ति बाल अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा, ४६ बेड कटाैती
काठमाडौं, १७ चैत – देशकै एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी र बजेट अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।…
औषधि : भारतमा फेल नेपालमा बिक्री, के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । भारतमा उत्पादित गुणस्तर फेल भएका औषधि नेपाली बजारमा खुलेआम रूपमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने गरेका छन् । सरकारले प्रभावकारी…
मिर्गौला कति संवेदनशील ? यसरी सकिन्छ मिर्गौला बचाउन
स्वर धाेद्राे किन हुन्छ ? कसरी बनाउने सुरिलाे ?
समायाेजन सकस : चिकित्सक अान्दाेलनले बिरामीले उपचार पाएनन्
नुन धेरै खानुहुन्छ ? यस्तो हुन्छ खतरा !
२ सय १३ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ शैयाकाे अस्पताल बनाउने निर्णय (नामावलीसहित)
क्यान्सर दिवस : कसरी लड्ने क्यान्सरसँग ?
कुरिलो निकै फाइदाजनक !
औषधी खान छाडेमा के हुन्छ एचआइभि संक्रमितलाई ?